गतिछाडा विश्वविद्यालय र चोराउने कलेजका कारण लाइसेन्सिङ परीक्षामा बढी फेल – Health Post Nepal
गतिछाडा विश्वविद्यालय र चोराउने कलेजका कारण लाइसेन्सिङ परीक्षामा बढी फेल
डा. धर्मकान्त बास्कोटा
२०७५ मंसिर २३ गते १५:१७
विशेषज्ञ डिग्री लिएका ३४ प्रतिशत चिकित्सक काउन्सिल दर्ता परीक्षामा असफल
अनशन स्थगित गर्न डा. केसीलाई माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूको आग्रह
विशेषज्ञ लाइसेन्स परीक्षामा १७५ डाक्टर फेल
‘लापरबाही गर्ने’ डाक्टरलाई रिहा गर्न चिकित्सक संघको माग
काउन्सिलमा युवा चिकित्सक संघको तालाले ६७२ विशेषज्ञ चिकित्सकको शनिबारको लाइसेन्सिङ परीक्षा प्रभावित होला ?
चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि धेरै तरिकाबाट विभिन्न व्यक्ति र क्षेत्रबाट प्रयत्न भइरहेकै छन् । पछिल्ला दिनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि उठ्ने
गरेका गुनासाको धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिसके पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षामा प्रत्येकपटक यति धेरै विद्यार्थी फेल भएको विषयले सधैँ चर्चा पाइरहेकै छ ।
विश्वविद्यालयबाट तोकिएको पाठ्यक्रमअनुसारको कोर्स सरासर पूरा गरेर आएको विद्यार्थी उस्तैखालका प्रश्न आउने काउन्सिलको परीक्षामा पटक–पटक फेल भइरहेका छन् । अब हामीले निर्मम भएर समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ । चिकित्साशिक्षामा जतिसुकै सुधार गरे पनि अन्तिम प्रतिफल त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर नै राम्रो हुनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति पहिलो सर्त हो । त्यसैले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अभियान, प्रयत्न भइरहेका छन् । तर, अबको सुधार परीक्षा प्रणाली र अभ्यासमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले नेपालमा दुई विश्वविद्यालय (त्रिवि, केयू)सहित धरान र पाटन दुईवटा प्रतिष्ठानले चिकित्साशिक्षाको जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । अहिले परीक्षा ती कलेजहरूमै हुन्छन् । भलै प्रश्नपत्र केन्द्रबाटै र स्ट्यान्डर्ड नै जान्छन्, तर परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने विश्वविद्यालयहरूकै हो । काउन्सिलको निरीक्षण सिट निर्धारणको तहसम्म मात्रै सीमित छ । तर, हामीले गत वर्ष केही कलेजका परीक्षामा हाम्रा प्रतिनिधि पनि पठाएर हेर्यौँ । परीक्षाको अवस्था दयनीय छ ।
तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?
काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षाका लागि पनि हामी काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटनबाटै प्राध्यापकहरू लिन्छौँ । उहाँहरूले नै प्रश्न निकल्ने हो । प्रश्न विश्वविद्यालयका परीक्षामा आएकै जस्ता हुन्छन् । तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?
यस आधारमा हामीले अब शंका गर्ने ठाउँ कलेजहरूमा हुने विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू नै हुन् । यथेष्ट प्रमाण त चाहिन्छ, तर प्रमाण छैन भनेर अब मौन बस्ने वा यसलाई सुधार्न नलाग्ने सुविधा हामीसँग छैन । तर, चोराएर ५० प्रतिशत ल्याउन त गाह्रो छैन नि !
काउन्सिलले लिने परीक्षा सकिएपछि हामी फ्याकल्टीहरूसँग बस्छौँ र समीक्षा गर्छौं । उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई केही आउँदै आउँदैन ? केही नआउने विद्यार्थी कसरी पास भइरहेका छन् त ? न्यूनतम गुणस्तर पनि भएन भने हामीले खोजेको स्वास्थ्यसेवामा सुधार कसरी सम्भव छ ? हामीले पछिल्लो समय ‘खडेबाबा’हरू हटायौँ, धेरै सुधार भएका छन् ।
परीक्षामा जाने विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि के गरेर बस्छन् ? विश्वविद्यालयहरूले प्रतिनिधि पठाउँदा पनि एक–दुईजना कर्मचारी पठाउने र उनीहरूले पनि कलेजहरूले दिने आतिथ्यमा रमाएर नियमन र निरीक्षणमा ध्यान नदिँदा परीक्षा पूर्णतः कलेज र त्यहाँका प्रोफेसर–कर्मचारीले चाहेजस्तै हुने गरेको छ । धेरैजसो विद्यार्थीले लेखेका उत्तर पनि उस्तै–उस्तै भइरहेका छन् । बाहिर प्रर्याप्त हल्ला आइरहेका छन् । कलेजहरूकै संलग्नतामा परीक्षामा विद्यार्थीलाई सिकाएर एउटै उत्तर लेख्न लगाइन्छ । होइन भने किन विद्यार्थी कलेजका परीक्षा सहजै पास गर्छन्, तर उही प्राध्यापकले उस्तैखाले प्रश्नमा लिएको काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुन्छन् ?
छात्रवृत्ति परीक्षामा आएका विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई समेत हामीले बोलाएर विश्वविद्यालयहरूमा पनि यो कुरा पुर्याइदिनुस् भनेका छौँ । विश्वविद्यालयहरू नै गतिछाडा भए भने, के लाग्ला र ? काउन्सिलले मात्रै गरेर हुन्न । साँच्चै भन्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूले राम्ररी गरिदिने हो भने काउन्सिलले खासै दुःखै गर्नुपर्दैन । तर, कलेजहरूले छाडा छोडिदिए भने काउन्सिलले मात्रै सम्हालेर गुणस्तर कायम रहन सक्दैन ।
Tags: चिकित्साशिक्षा, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
One thought on “गतिछाडा विश्वविद्यालय र चोराउने कलेजका कारण लाइसेन्सिङ परीक्षामा बढी फेल”
Kindly ask him to publish details by all the medical colleges of Nepal to know the quality of medical education on each one of them so that one decide where to go for quality medical education in the country.